Shina: Voaheloka higadra telo taona ilay mpitantana ny tranonkala mpiaro ny zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2019 12:44 GMT
Nogadraina telo taona an-tranomaizina tamin'ny 23 Novambra 2009 tao amin'ny tribonalin'ny distrikan'i Chengdu Wuhou noho ny “fananana tsy ara-dalàna ny tsiambaratelom-panjakana” mifandraika amin'ny lahatsoratra navoakany tao amin'ny tranonkalany i Huang Qi, mpanorina ny Foibe Tianwang ho an'ireo Olona Tsy Hita (izay nantsoina taty aoriana hoe Foiben'ny Zon'Olombelona Tianwang ).
Araka ny tatitry ny BBC, nilaza ny vadin'i Huang, Zeng Li fa “valifaty” ny didim-pitsarana noho ny fandraisany anjara tamin'ny raharahan'ny horohorontany satria azon'ny rehetra jerena ny fampahalalam-baovao azony. Ary nilaza ny Amnesty International fa lasibatra i Huang tamin'ny andiana lalàna mifehy ny tsiambaratelom-panjakana ao Shina ary nitaky ny famotsorana azy tsy misy hatak'andro izy ireo.
Natsangana ny tranonkaka Tianwang tamin'ny voalohany mba hanampiana amin'ny fanoherana ny olan'ny fanondranana olona an-tsokosoko tany Shina tamin'ny taona 1998, saingy nitarina izany taty aoriana tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny fanentanana manohitra ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Taorian'ny horohorontany tany Sichuan tamin'ny taona 2008 dia nanampy ireo ray aman-dreny namoy ny zanany i Huang noho ny olana momba ny fanamboarana fefiloha ary nanome toro-hevitra ireo fianakaviana izay nanana zanaka miisa dimy maty ka naniry hitondra ny raharaha tany amin'ny fitsarana mba hitory ireo manampahefana tao an-toerana taorian'ny horohorontany. Nalain'ny polisy tao Chengdu i Huang tamin'ny volana Jona 2008 ary notanana am-ponja hatramin'ny fotoana nanoratana.
Ity no fisamborana faharoa an'i Huang. Nosamborina izy tamin'ny 3 Jona 2000 noho ny fiampangana azy tamin'ny “fandrisihana fanakorontanana” ary voaheloka higadra dimy taona an-tranomaizina. Voampanga ho namoaka lahatsoratra momba ny hetsi-panoherana nosoratan'ireo mpanohitra monina any ivelany izy tao amin'ny tranonkalany.